कोरियामा जम्यो गजल मुशायरा – Sadak Media
कला / साहित्य प्रवास
कोरियामा जम्यो गजल मुशायरा
कोरिया, ६ फागुन, २०७४: अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज दक्षिण कोरिया च्याप्टरको आयोजनामा गत शुक्रबार गजल मुशायरा सप्पन्न भएको छ । ‘काव्य-सुधा’को पाँचौं श्रृङखलाको रूपमा आयोजित मुशायरामा चर्चित गजल गायक राज सिग्देलको उपस्थितिमा उत्कृष्ट ४ गजलकारहरूको बेजोड प्रस्तुति रहेको थियो ।
पहिलो गजलकारको रूपमा मुशायरामा प्रस्तुत भएका स्रस्टा गोपिकृष्ण लामिछानेले सुरुमै आफ्नो गहिरो भावको गजल सुनाएर दर्शकलाई सजिलोसँग आकर्षित गरे ।
“हाम्रा कलेजहरुमा त्यस्तो के ज्ञान हुन्छ
डिग्री सकेर सबको खाडी उडान हुन्छ
निद्रा चोरेर लाने त्यो जून कहाँ छ होला
जसको नबोल्ने तस्विर हेर्दै बिहान हुन्छ…”
अधिकांश गैह्र-मुसलसल गजलहरू सुनाएका गजलकार लामिछानेका हरेक शेरहरूले जीवन दर्शन र दिव्य सन्देश त दिन्थे नै मानविय स्वभाव र सामाजिक प्रवृत्तिमाथि गम्भीर कटाक्ष पनि गरेको पाइन्थ्यो । जव दोश्रो गजलकारका रूपमा स्रस्टा जनक सन्यालले सुमधुर तरून्नुम गजल गायन प्रस्तुत गरे, तव गजललाई गाउनुको औचित्य पुष्टि भएको छनक मिल्थ्यो ।
“सजाएर लाली अधर चट्ट प्यारी
सबेरै सबेरै कहाँ हो सवारी ?
बस्यौ माहुरी झैं थपक्कै तिमी त
बनाएर यो दिल कुनै फूलबारी !…”
आफ्ना कोमल धारका गजलहरू मार्फत गजलकार सन्यालले प्रणय, संयोग, वियोग र सुन्दरताका विषयबस्तुहरू समेट्ने प्रयास गरे । गायक समेत रहेका सन्यालले गजल गाइरहँदा दर्शकहरू मोहित भैरहेको देखिन्थ्यो । तेश्रो गजलकारका रूपमा प्रस्तुत भएका राज सुवेदी “विवश”ले आफ्ना धारिला शेर मार्फत दर्शकहरूलाई वाह वाही गरिरहन बाध्य बनाए ।
“कृतिम हुन्छ पहिचान तिम्रो शहरमा
रुपैयाँ हो भगवान तिम्रो शहरमा
अनौठो कला रैछ सम्पन्नताको
बिना बस्त्रको ज्यान तिम्रो शहरमा….”
छोटो समयमै बलियो गजलकारको छवि बनाएका सुवेदीका हरेक शेरहरूमा गहिरो अन्दाज पाइन्थ्यो । मुशायरा प्रस्तुतिको अन्तिम मेलो समाएका गजलकार रामचन्द्र शर्मा जब आफ्नो पहिलो गजल सहित मन्चमा देखिए, दर्शकदीर्घामा फेरि थप रौनकता र वाह वाहीको वर्षा भयो । गजलकार शर्मा बलियो भाव र मौलिक लयका गजलका लागि चर्चित छन् ।
“लाग्दैछ जिन्दगानी कमजोर टेको जस्तै
हाे जस्ताे लाग्न थाल्याे पहिराे खसेकाे जस्तै
ज्युँदाे छँदा मनुजकाे दर्जा समेत मिलेन
चुपचाप बस्छ शालिक द्याैता भएकाे जस्तै…”
प्रस्तुति र हाउभाउले समेत खरो उत्रिएका गजलकार शर्माका हरेक शेरले भिन्न भिन्न अन्दाज बटुल्दै प्रणय, समाज, देश र मानव चिन्तनका विषय समेत बोल्न भ्याए ।
यसैबीच, प्रखर गजल गायक राज सिग्देललाई यस बर्षको अनेसास कोरिया म्युजिक अवार्ड प्रदान गरिएको छ । अवार्ड ग्रहण गर्दै गायक सिग्देलले गजल गाइए मात्रै जीवन्त हुन सक्ने बताएका छन् । अझै पनि नेपाली गजलको वर्गीकरण पत्र-पत्रिकामार्फत भैरहेकोप्रती चिन्ता व्यक्त गर्दै गायक सिग्देलले कविता, गीत र गजल कुन कुन हुन् भन्ने समेत हेक्का नरहेको दुखेसो पोखे । उनले विदेशमा हुने नेपाली गजल मुशायरामा उपस्थित हुन पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै मुशायराका चारै गजलकारहरूले आफ्ना गजल मार्फत अब्बल ठहराएको बताए ।
दक्षिण काेरियाकाे राजधानी साैलकाे दाेङ्देमुन स्थित नेपाल हाउसमा सम्पन्न मुशायराको संयोजन गजलकार विनोद परिवर्तितले गरेका थिए । मुशायरा सँगैको रचनावाचन कार्यक्रममा राम केसी नयन, एल बि बस्नेत, धिरेन्द्र स्पन्दन, दिपेन्द्र भट्टराई , दिनेश पथिक, बलदेव भट्टराई , प्रकाश प्रयास, एल्जी विवश, मीन बिक, समीर यात्री, लोकराज न्यौपाने , रेशम अधिकारी, आर सी भुसाल, नारायण भुसाल, गंगा बस्नेत, महेन्द्र केसी, गोपाल न्यौपाने , कमल बाछिटे, शंकर बाइक संगम, बिष्णु वाग्ले, भोजराज जैसी, अनन्त यात्रा बास्तोला,भवस बी बम्जन, जगत केसी, संजय घिमिरे , जीवन भन्डारी, रुद्र कंडेल, जीवन खत्री, आशा थापा लगायत करिब चार दर्जन सर्जकहरूले आ-आफ्ना रचना वाचन गरेका थिए । च्याप्टरका अध्यक्ष प्रमोद सारंगको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमलाई उपाध्यक्ष डि आर न्यौपाने सूर्यले संचालन गरेका थिए ।
पुरा होला त? घरघरमा ग्यासको पाइप जोड्ने ओलीका सपना
मामाघर घुम्न आएका बालकको पोखरीमा डुबेर मृत्यु